Japoney amin'ny ririnina
Ny fironana moderne, na dia maro samihafa aza, saingy mbola misy tari-dalana ao amin'izy ireo dia miavaka tokoa. Ity tari-dalana ity dia akanjom-behivavy, manantitrantitra ny fahalemen'ny vehivavy. Tsia, tsy momba ny endrika "zazalahy ratsy", fa momba ny kiraro kiriodra sy ireo zavatra goavambe. Amin'ny ankapobeny - misy zavatra iray avy amin'ny lisitry ny outerwear - jiro fiompiana ririnina.
Tantara sy moderna
Ny zaridaina dia jiro mafana sady lava matevina . Ny farany, amin'ny ankapobeny, dia nofatorana felana. Ny modely dia nipoitra avy tamin'ny akanjon'ny miaramila, indrindra fa ireo mpanamory, voalohany - Etazonia, ary avy eo ny USSR. Nampiasain'ireo mpizahatany ireo valan-javaboary - tsy mahagaga sy mafana amin'ny fotoana iray ihany, tsara ho an'ny fitsangatsanganana amin'ny toe-javatra samihafa. Ary avy eo dia nitsambikina imbetsaka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny valan-javaboary amin'ny ririnina voajanahary, ary avy eo dia "nampiasa" azy ireo tamin'ny fiakaran'ny vehivavy.
Ireo valan-javaboary amin'izao fotoana izao dia lavitra ny modely voalohany, izay notanterahina manokana tao amin'ny kaki. Ny silhoueta dia mety ho mivantana na trapezoidal, na kely azo ampiasaina, miaraka amina kofehy miaraka amin'ny mpandrindra ao anaty na ivelany. Anisan'ireo loko ireo: ny oliva mahazatra sy ny fialany, ny fasika na ny rameva, mainty, manga manga, palette mena, mena na bordeaux (arakaraky ny fironan'ny vanim-potoana), maitso (avy amin'ny tavoahangy kaopy) sy ny hafa.
Maro ireo fahasamihafana niseho tao amin'ny fitaovana jak'izay - raha toa ka talohan'ny orindrahatra ivelany na bolognevye modely, ankehitriny dia mety ho volon'ondry izy ireo.
Fanafody ho an'ny zazakely amin'ny ririnina
Pooh . Ny mahazatra indrindra amin'ny fillers. Azonao atao ny manasa azy io, azonao entina any amin'ny mpanadio maina, saingy tsy hainao ny vokatr'izany, mandra-pahavitanao izany na izany (midina ny trano hialana sy hiala). Ny zavatra tsy "mavesatra" dia mamaky amim-pitandremana ny tolo-kevitr'ireo mpamokatra.
Synthepon . Miharatsy kokoa noho ny an'ny hafa rehetra avy amin'ity lisitra ity, dia mitazona hafanana izany. Noho izany, ireo jak'akanjom-behivavy toy izany dia mety ho amin'ny ririnina any amin'ireo faritra izay tsy misy mangatsiaka mafy. Fa ny modely rehetra ao amin'ny sintepon dia mora simba ao an-trano, mila misafidy ny iray izay tsy ahodinkodina ny felany.
Tinsulate . Ny fotokevitra momba ny fikarakarana ity filler vaovao sy maoderina ity dia mifototra amin'ny zava-misy satria, noho ny vatany marevaka, dia mitana molekiola maivana kokoa ao ambadiky ny ambiny - manome tosika avo lenta loatra izany. Ny vokatra miaraka aminy dia mora vidy amin'ny elanelan'ny 30-40 degrees ary tsy mahavery ny endrika.
Hollofiber . Ny mpifaninana lehibe indrindra dia ny faniriana. Ity no mpamatsy fafana amam-bika sy mahazatra indrindra azo ampiasaina amin'izao fotoana izao. Voasary ao an-trano izy, tsy very, ary tsy tafiditra ao an-trano.
Aiza no hividianana akanjom-behivavy amin'ny ririnina?
Asos - ny sandany dia hafa, hatramin'ny 150 ka hatramin'ny 500 $ arakaraka ny modely.
Mango - eo amin'ny $ 200, saingy indraindray ny valan-javaboary amin'ny ririnina dia azo raisina amin'ny fihenam-bidy.
Zara - 150-200 $.
Amin'ny inona no hikolokolo zaridaina amin'ny ririnina?
Ny akanjo japoney amin'ny ririnina dia mifamatotra amin'ny pataloha ety sy malalaka . Mety misy karazany roa ny kiraro: mavesatra loatra - amin'ny fehiloha tokana, volo matevina, misy kofehy sy miloko marevaka, na mofomamy sy malefaka - amin'ny akanjom-borona. Samy azo ekena izy roa ireo. Raha ny akanjo na ny akanjo, tsara kokoa raha toa izy ireo dia vehivavy, votsaoka, hazavana, manidina. Ny akanjo dia tokony ho karazany voalohany, izany hoe, hidy.
Mpilalao baolina lava Nike
Women's sneakers Lakost
Mitovy amin'ny akanjom-bolo - sary vitsivitsy amin'ny karazana lamaody indrindra amin'ny fotoana rehetra
Volo fotsy hoditra
Sneakers Nike eo amin'ny kirany
Fivarotana any Prague
FEMP amin'ny tarika miditra
Rano ao anaty vilany misy ovy
E. coli amin'ny urine
Takelaka tsy mahazatra ho an'ny rindrina
Ireo mpianatra manana ny aretina Down dia nitondra ny mpampianatra teo ambany satroboninahitra
Miangavy faka fingotra
Inona no tokony handrahoina amin'ny voankazo Bulgarian ho an'ny sakafo?
Sinusitis - fitsaboana amin'ny antibiotika
Ireo kiraro hoditra vita amin'ny hoditra
Rà avy amin'ny tendrontany
Amin'ny inona no manao jiro lava volo?
Sakafo mavokely ao anaty voamaina
Ny fomba hijanonana ao amin'ny fironana dia tsy manapaka ny akanjo: lamaody KUPIVIP.BY
Salade "Tenderness" - resipe
Pamela Anderson nanome an'i Kim Kardashian ny akanjo volom-borona ho an'ny eco-fur
Trano fisakafoana kekeko kely
Shaurma miaraka amin'ny akoho ao an-trano - resipe
Ovenana misy mikraoba
Radikulitis - fitsaboana any an-trano